ကော့တေး Chocolate Slimတကယ့်အတွေ့အကြုံများ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အသုံးပြုမှုချောကလက်ကိုသောက်
အတွေ့အကြုံများအသုံးပြုမှုအတွက် Chocolate Slim
၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ၁၆၀ စင်ငါတွယ် ၈၆ ကီလို၊ကျွန်တော်တကယ်လိုကိုယ်အလေးချိန်၊ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာငါ့ကိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်။ ပြင်းထန်သောအစားအစာမဟုတ်လျင်အမြန်ကူညီခဲ့။ အဆိုပါအားကစားပေးခဲ့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏအောင်ဝတ်ဆင်နိုင်ငါ့အခါတိုင်းအဝတ်။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်ရက်အကြံပြု Chocolate Slim။ ပထမဦးဆုံးမှာငါဘယ်လောက်အံ့ဩဒီမသောက်နိုင်ကူညီသောကြောင့်၊ဒါဟာတစ်ဦးချောကလက်လှုပ်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်၊အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လမ်း?
ယခုတွင်ငါသည်ယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်ရှိကြောင်းထိရောက်သောကိရိယာငါ့ကိုကူညီနိုင်မလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ် ၁၃ ကီလိုသာလုပ္။ အသောက်အလွန်အလင်းနှင့်သာယာသောအ aftertaste။ သင်ကိုယ်အလေးချိန် deliciously နှင့်ယ့္သာ။ တခြားအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်?
လျှောက်လွှာတွေ့အကြုံ Chocolate Slim ကနေ Renata၊ဟန်ဂေ
ငါကြိုက်အသောက်နှင့်အတူ၎င်း၏သာယာသောအရသာ။ နောက်ရက်အနည်းငယ်အသုံးပြုရန်ငါခံစားရမှန်ပြောင်း။ စွမ်းအင်စာသား gushes ထွက်၏။ ငါဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြာကြာနေဖို့အတွက်အားကစားရုံအကြောင်းကျွန်တော်အများကြီးအားကောင်းထက်မီ။
တစ်ဦးကိုတလအတွက်စီမံခန့်ခွဲဆုံးရှုံးဖို့ ၅ ကီလိုဂရမ်၊နှင့်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျေးဇူးတင်စရာပါကြီး။ ထောက်ခံရတဲ့အရာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။